Tag: webtrends itinye | Martech Zone
Tag: webtrends itinye aka
B2B ịde blọgụ - Webtrends Tinye 2010
Sọnde, Febụwarị 14, 2010 Sunday, October 19, 2014 Douglas Karr
Ndị ukwu nọ na Webtrends zigara vidiyo nke ndị ọkà okwu na Webtrends Engage 2010. Nke a bụ nkeji 10 m mere - B2B Blogging na inbound marketing strategy. Ihe ngosi a gbanwere na ihe edeturu m na Blogging for Business n'izu gara aga. Jide n'aka na ịdebanye aha maka Webtrends Engage 2011 na San Francisco.
Ọ bụrụ na ịnọghị na Webtrends Engage 2010 ogbako, ị tufuru ogbako ọgụgụ isi azụmahịa dị egwu. Njikọ adịghị ka ọgbakọ ụlọ ọrụ ọ bụla m gara. Ebumnuche bụ iji nye ndị ahịa na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ohere ịnweta ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị mma na ndị na-enwu gbaa na ụlọ ọrụ ịntanetị niile. Debanye aha maka afọ ọzọ na-aga na San Francisco - ha na-ere mgbe niile! N'afọ a, a kpọrọ m ka m mepụta, mwepu 10 nkeji
Ọ bụrụ na ịhụghị vidiyo na-esonụ, pịa site na iji hụ nhụjuanya eziokwu masugp tinye Webtrends! Nke a bụ ngosipụta dị ukwuu nke iji nyocha na ọrụ mbibi a hụrụ na ogbako Webtrends Engage 2010. Igwefoto ahụ na-ahụ na akara na baajị, na-emelite Webtrends, yana - na ezigbo oge - na-egosiputa nkọwa ndị bịara ọhụụ!